လက်တွေ့သက်သေအထောက်အထားနှင့်သိပ္ပံနည်းကျအမူအကျင့်ဆိုင်ရာရှုထောင့်မှ Cybersex စွဲလမ်းမှုကိုအထောက်အကူပြုသည့်အချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ သီအိုရီဆိုင်ရာစဉ်းစားဆင်ခြင်မှု (၂၀၁၄) - သင့် ဦး နှောက်သည်သင့် ဦး နှောက်တွင်
တစ်ဦးသိမှုအပြုအမူကြည့်ရန် မှစ. ကျဘာစွဲမှပံ့ပိုးအချက်များအပေါ်ပင်ကိုယ်မူလအထောက်အထားများနှင့်သီအိုရီကိုစဉ်းစား (2014)
လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးစစ်ဆင်ခြင်း - ကုသခြင်းနှင့်ကာကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာဂျာနယ်
Volume ကို 21, ပြဿနာ 4, 2014
Doi: 10.1080 / 10720162.2014.970722
ခရစ်ယာန် Laiera & Matthias အမှတ်တံဆိပ်b*
အွန်လိုင်း Published: 17 နိုဝင်ဘာ 2014
တစ်ဦးဖြစ်ရပ်ဆန်း၏သဘောသဘာဝကိုမကြာခဏကျဘာစွဲ (CA) လို့ခေါ်တဲ့နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး၎င်း၏ယန္တရားများဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။ ယခင်အလုပ်အပြုသဘောအားကောင်းနှင့် cue-reactivity ကို, CA ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အဓိကယန္တရားဖြစ်စဉ်းစားနေစဉ်အချို့သောလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း,, CA မှအားနည်းချက်ဖြစ်အံ့သောငှါအကြံပြုထားသည်။ ဤလေ့လာမှု၌, 155 လိင်ကွဲအထီး 100 ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများ rated နှင့်လိင်စိတ်နိုးထသူတို့ရဲ့တိုးညွှန်ပြ။ ထို့အပွငျ, CA, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားဖို့ sensitivity ကိုများနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်လိင်၏အလုပ်မဖြစ်အသုံးပြုမှုကိုဦးတည်လိုတဲ့သဘောထားကိုအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ တစ်ငုပ်လျှိုးနေဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာညီမျှခြင်းမော်ဒယ်မှာတော့လိင်၏အလုပ်မဖြစ်အသုံးပြုမှု CA. နှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှား၏ဆက်ဆံရေးကမကထပြုခဲ့ အဲဒီမှာ, CA မှအားနည်းချက်၏အကြောင်းရင်းများဖြစ်ကြောင်းနှင့် CA. ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနဲ့အလုပ်မဖြစ်ဖြေရှင်း၏အခန်းကဏ္ဍကိုအဘို့သက်သေသာဓကများကိုလေ့လာမှု၏ရလဒ်များကိုပြသ ရလဒ်နှင့်သီအိုရီထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အဆိုအရကျနော်တို့အားနည်းချက်၏အကြောင်းရင်းများ addressing, CA တစ်သိမြင်-အပြုအမူမော်ဒယ်သိမြင်မှု၏အခန်းကဏ္ဍကိုနှင့်အပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောအားဖြည့်များ၏အခန်းကဏ္ဍကိုတင်ပြ။